Akụkọ - Otu esi etinye nchara nchara nke Serrated
A na-eji grating ígwè serrated eme ihe n'ọtụtụ ebe na-ewu ụlọ na ebe ọha na eze ndị ọzọ.N'iji ya tụnyere grating ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke nwere ogologo na ọbụna elu, ụdị nchara ígwè a nwere njirimara nke notch onu nke a na-eji egbochi ndị mmadụ ịpụ n'elu ma n'otu oge ahụ na-enye ikike ikuku ikuku dị mma, ya mere ọ nwekwara ngwa ngwa ya bara ụba. .Ya mere, anyị na-enye gị ụzọ dị mfe iji wụnye serrated steel mmanya grating.
Tupu echichi, enwere ụfọdụ nkwadebe ị kwesịrị ime.Nke mbụ, tinye bọọdụ ịdọ aka ná ntị ma ọ bụrụ na ebe ọrụ gị dị n'ebe ụfọdụ ọtụtụ mmadụ nwere ike ịgafe kwa ụbọchị.Nke abụọ, tinye nchara nchara gị n'ebe dị larịị wee lelee ma ọ bụrụ na ọ dị ebe ọ bụla grating na-adabaghị nke ọma.Soro onye na-emepụta ihe na-ekwurịta okwu iji dochie grating ndị ezighi ezi ma ọ bụ gbajiri agbaji.
Họrọ usoro kwesịrị ekwesị iji wụnye gratings dabere na ọrụ a kapịrị ọnụ.Ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-agbado ha ruo mgbe ebighị ebi ma ọ bụ jiri eriri kechie ha.N'ikwu okwu n'ụzọ nkịtị, mgbe a na-eji grating dị ka ụzọ awara awara, ị kwesịrị ịgbanye ha kpamkpam.Na n'akụkụ na-esonụ, anyị ga-eji ụzọ ije dị ka ihe atụ iji gosi gị otu esi etinye grating ígwè serrated nke ọma.
Tinye ihe ndị ahụ n'ime akụkụ nke nwere crossbars ma hụ na ihu serrated chere ihu n'elu.Jiri otu ọkụ rụọ ebe ịgbado ọkụ ise - abụọ n'akụkụ aka nri, abụọ n'aka ekpe na otu n'etiti grating na nkwado etiti.Gwuo oghere ụfọdụ n'ime ihe nkwado etiti na ebe ịgbado ọkụ ka ọ dịrị ndị ọkụ eletrik na ndị na-akụ pọmbụ mfe imeghe grating ma jiri waya eletrik dị mkpa na ọrụ ọkpọkọ rụọ ọrụ.
Tinye ihe mkpado sadulu na nkwado wee bulite bolt elu.Mechie mkpachị ndị ahụ site n'itinye igwe na-asa ihe na nut na nsọtụ bolt.Jisie ike na aku na bolt ahụ na mgbanaka.